कस्तो अचम्म ! लोकसेवा आयोगले मागेका पदमा परेन दरखास्त
कात्तिक ६, २०७५
काठमाडौं – लोकसेवा आयोगको १ सय बढी प्राविधिक पदमा दरखास्त नै पर्न सकेको छैन ।
गत वर्ष कूल विज्ञापनमध्ये १ सय १ विज्ञापनमा दरखास्त नपरेको लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार दरखास्त नपरेका विज्ञापनमध्ये ६५ आन्तरिक प्रतियोगिता अन्तर्गतको छ । एउटा खुला प्रतियोगिता र ३५ समावेशी प्रतियोगिताका विज्ञापन छन् ।
अधिकांश प्राविधिक तहका विज्ञापनमा दरखास्त नपरेको आयोगले जनाएको छ । त्यसमा पनि धेरै स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका विज्ञापनमा दरखास्त परेका छैनन् । ‘एक त जनशक्ति नभएर नै नपरेका हुन्, अर्काे स्वास्थ्य शिक्षा विषय नेपालमै पढाइ नहुँदा दरखास्त नआएका हुन सक्छन्,’ आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले भने ।
उनका अनुसार शिक्षाशास्त्र पढेकाबाट आएको दरखास्तले भने मान्यता नपाउँदा खाली हुन गएको हो । उक्त विषय भारतमा पढाइ हुन्छ । नेपालमा शिक्षा संकायतर्फ स्वास्थ्यको पढाइ हुने गरेपनि मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा ऐनले मान्यता दिँदैन । दरखास्त नपरेकामध्ये ५८ विज्ञापन स्वास्थ्य क्षेत्रका छन् । अधिकांश माथिल्लो तहमा खाली छ ।
केही इन्जिनियर, टाइपिस्ट, अमिन, अपरेटर, पशु स्वास्थ्यलगायत पदका विज्ञापन खाली रहे । चिकित्सक क्षेत्रका नवौं र एघारौं तहका बढी छन् । आयोगको केन्द्रीय कार्यालय अन्तर्गतका ६८ विज्ञापन र धनकुटा, हेटौंडा, पोखरा र जुम्ला कार्यालयका ३–३ विज्ञापनमा दरखास्त परेन ।
इलाम, बागलुङ, दाङ, सुर्खेत, दिपायल र भीमदत्तनगर कार्यालयका २–२ तथा खोटाङ र काठमाडौं कार्यालयका ४–४ एवं जलेश्वरको एक विज्ञापन खाली रहेको सुवेदीले जानकारी दिए ।
एउटा मात्रै खुला प्रतियोगिता रहेको नवौंं तहको कन्सल्टेन्ट सर्जिकल ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजिस्ट पदमा दरखास्त परेन । समावेशीतर्फ अपाङ्गतातर्फ ३, महिलातर्फ ११, दलितर्फ ११, मधेसी र आदिवासी जनजाति ३–३ विज्ञापनमा दरखास्त परेन अन्य भने आन्तरिक प्रतियोगिताका विज्ञापन छन् ।
आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले गत आर्थिक वर्ष ५ हजार ९ सय ७० पदका लागि १ हजार २ सय ४ र समावेशी प्रतियोगितातर्फ १ हजार ८ सय ७ विज्ञापन खुलाइएको जानकारी दिए । त्यसमा कूल ५ लाख ६७ हजार ८ सय ५३ दरखास्त परेको थियो ।
अघिल्लो आवभन्दा गत वर्ष दरखास्तमा ३३ प्रतिशतले कमी आएको छ । सबैभन्दा बढी दरखास्त खरिदार पदमा १ लाख ४६ हजार ४ सय ७६ छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर २ बाट कूल दरखास्तको २५ प्रतिशत छ, जसमा २१–२५ वर्ष उमेर समूहका ३८ प्रतिशतले दरखास्त दिएका थिए ।
दरखास्त परेकामध्येबाट ७ हजार ७ सय १८ जनालाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको छ, जसमा २ हजार ४ सय ६५ (३२ प्रतिशत) महिला छन् । प्रदेश नम्बर २ बाट सबैभन्दा बढी २० प्रतिशत स्थायीका लागि सिफारिश भएका छन् । समावेशीतर्फ ३ हजार २ सय ४४ सिफारिश भए । गत ८ वर्षमा ४१ हजार ६८ स्थायी नियुक्तिमा सिफारिश भएका छन् ।
सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थातर्फ ३ लाख ६९ हजार ८ सय ५७ मध्ये लिखित परीक्षामा १ लाख ५९ हजार ४ सय २६ सहभागी थिए । आयोगका प्रवक्ता शर्माका अनुसार आयोगले त्रिवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नारायण ढु्ङ्गाना/रासस
कात्तिक ६, २०७५ मा प्रकाशित
दलित महिलालाई कपाल मुण्डन गर्दै कुटपिट, आरोपितलाई सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसूरमा मुद्दा
नेपालीबाहेकका विषय अङ्ग्रेजीमा अध्ययनअध्यापन हुने
देशभर ज्यानमारा दुर्घटना : चालकको मृत्युसँगै घटना सामसुम, किन हुँदैन अनुसन्धान ?
जाडोमा खानुस् यो चिज चमत्कार हुन्छ !
वडाध्यक्षको पावर - घर नै नभएको जग्गाको 'घरबहाल कर' !
दिनदिनै खानुस् एक मुट्ठी अनार, हुनेछन् यस्ता फाइदा